Ukuphupha uRauch Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umsi uyadalwa xa kutshiswa into, umzekelo iinkuni zomlilo wecuba okanye icuba elikwicuba. Amanye amakhandlela anomsizi ovelisa umsi. Ngomsonto wesiqhumiso, ngumsi oqala ukuvula ivumba.
Umsi unokubaluleka kokubaluleka kunye nokomoya. Ukutya okufana nentlanzi, umzekelo imackerel, okanye inyama ziye zatshaywa kumawaka eminyaka. AmaIndiya ayedla ngokunxibelelana neempawu zomsi. Abafuyi beenyosi ngamanye amaxesha basebenzisa umsi xa besebenza kwindlu yeenyosi. Ekupheleni kokhetho lukapapa, umsi omhlophe uyenyuka. Nangona kunjalo, umsi unganetyhefu, kwaye xa kuthe kwatsha umlilo ungathatha umphefumlo wakho kunye nokubona kwakho.
"Apho kukho umsi, kubakho nomlilo"itsho iqhalo. Oko kuthetha ukuba kuhlala kukho ingqolowa yenyani kumarhe.
Ukuba umntu uphupha ngokutshaya, banokoyika ukuba kukho umlilo kwenye indawo, mhlawumbi kwigumbi labo. Ngokunokwenzeka, umsi ephupheni nawo uvela ngokunxulumene ne-barbecue okanye indawo yokubasa umlilo. Ke ukuphupha kuyawubona umsi mhlawumbi njengokuhambelana okumnandi. Ukutolikwa kwephupha kuxhomekeke kumfanekiso ngqo wephupha. Ngaba umsi uyakhanya okanye umnyama, ngaba uyaluma amehlo akho, okanye ucacisa kancinci?
1 Uphawu lwephupha «umsi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umsi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umsi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umsi» - ukutolikwa ngokubanzi
Umsi otyebileyo walatha kwisimboli yamaphupha imeko engacacanga phantsi. Ukuba imivimbo ithintela umbono, oku luphawu lokuba iphupha aliboni kwimeko. Ukuba umsi ubangela iintloko, lo ngumqondiso kuphando lwamaphupha olala nokugula ngenxa yeemeko zakho zangoku, ezinokuthi zikhokelele ekuwohlokeni kwempilo.
Uphawu lwephupha "umsi" nalo uloyiko y duda uphawu. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umsi omnyama obambekayo ubonakalisa iimpikiswano kunye nophuhliso olungathandekiyo kwinkcazo edumileyo yamaphupha. Umsi omhlophe, kwelinye icala, ubandakanya ulonwabo kunye nolwamkelo lobuhlobo kwabanye abantu.
Ngokutsho kohlalutyo lokulala, ukutshaya endlwini okanye kwigumbi elingasentla sisilumkiso sezifo okanye abantu abaneenjongo ezimbi abahlukumeza eli phupha. Ukuba inyuka isuka eziko okanye ibheji, uphawu lwephupha luphawu lolonwabo, ukuvisisana kunye uxolo lwasekhaya.
Umsi ophuma esitovini, kwelinye icala, ubhengeza iinyembezi zosizi kunye nokudana kwincazelo eyaziwayo yamaphupha. Kuluvuyo olonwabisayo xa umsi ucoca iphupha. Nokuba imeko ibonakala inzima, ekugqibeleni uya kuyilawula.
Ukuba utshaya indlu yakho nesalfure ephupheni, uya kucelwa ukuba u-odole kwaye ubumbe ubomi bakho el mundo yomlindo. Ukunxiba isixhobo sokuphefumla ukuze ukhusele umsi kunokubonwa njengesilumkiso sento ehlasela ukuvusa ubomi.
Uphawu lwephupha «umsi» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwengqondo, uphawu lwephupha "umsi" ngu imvakalelo engekho zingqondweni, ekulumkisa abaphuphi. Ukuqonda kwakho kukwenza ukuba uqaphele imeko enokukulimaza engqondweni. Ukuze ufike kutoliko olucacileyo lwamaphupha, iphupha elo kufuneka likwenze kucace ukuba ingaba ukudibana okumnyama kunye nesimboli yephupha kuthetha okuthile malunga nemo yakho yengqondo. Mhlawumbi ixhomekeke ngoku I-Trübsinn.
Inkalo engathandekiyo yomsi inokubhekisa kubantu abalalisa ubuthongo phantsi koxinzelelo lweemvakalelo. Ukuba umsi uyanyibilika ngokuthe ngcembe ephupheni, oko kukuthi kutoliko lokuphupha ibinzana onokulisombulula iimeko ezinokuphikisana okanye ubuncinci ulawule.
Ngapha koko, uphawu lwephupha lukwangumqondiso we kucoca. Ukuqonda okungaphantsi kunokusebenzisa umsi wokulala ukukhusela iingcinga kunye neemowudi ezingalunganga.
Uphawu lwephupha «umsi» - ukutolika kokomoya
Umsi unyukela esibhakabhakeni kwaye ufuzisela umphefumlo okhulayo, umthandazo okanye idini ekuchazeni iphupha lokomoya.
Uphawu lwephupha lumele inguqu nakwinqanaba elingaphaya imibhiyozo engcwele. Ephupheni, oku kuthetha ukuba ungaseta unxibelelwano kunye nelizwe lokomoya ngoxinzelelo kunye nococeko.